Shirka u dhaxeeya maamulka hargeysa iyo dawlada banaadir oo ka furmay turkaga(sawiro) | warar sugan – Diabetic Diet Plans, Diabetic Supplies, and Diabetic Recipes are available at Diabetic Resources
Waxaa saaka ka furmay wadanka Turkiga shirka u dhexeeya Maamulka Hargeysa ka arrimaya iyo Maamulka Banaadir , iyada oo laba mas,uul ee labadan maamulka kala hogaaminaya Axmed Siilaanyo iyo Xasan Shiikh Maxmuud lagu casuumay shirkan.
Shinkan oo la filanayo in laga wada hadlo arrimo badan oo Soomaaliya khuseeya gaar ahaan sidii maamulka hargeysa loogu soo celin lahaa in uu ka qayb qaato xukuumad Soomaaliya yeelato ayaa lagu wadaa in aan wax natiijo ah laga gaadhin.
Maamulka Goboleedka Khaatumo ayaa iyagu dhawan warbixin cad ka soo saaray shirka Dawladda Turkigu marti galinayso , iyaga oo sheegay in maamulka Hargeysa matalo oo kaliya beelaha dega Burco iyo Hargeysa, deegaanka Khaatumana yahay mid Soomaaliyeed., waxayna digniin u direen Maamulka uu Hogaamiyaha ka yahay Xasan Shiikh maxmuud.
Xasan Shiikh Maxmuud oo isagu ka tirsan kooxda lagu magacaabo Damu-jadiid ayaa dhamaan xubnaha waftiga wadahadalkan dhinaca maamulka Bnaadir uga qayb galay waxa uu ka xulay kooxda Damu-jadiid.
Labadan dhinac ayaa shirka ay ku qaadanayaan Xafiiska Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga ee Ankara Palace ayaa la sheegay in aanay si toos isu arkayn , hasa yeeshee ay la kulmi doonaan madaxda dalkaasi si gooni gooniya, waxaana lagu wadaa in ay la kulmaan madaxweynaha dalka Turkiga Abdalla Gul.
Sidoo kale ayaa lagu wadaa in ay maanta galinka danbe la kulmaan raysal wasaaraha dalka Turkiga Erdogan, caawa fiidkaa ayaa qorshuhu yahay in war murtiyeed laga soo saaro shirka Ankara
Douche powder girls